2 दिन केभो सत्तामा गाको दादागिरी देखाउन थालिसक्यो, देउवा सरकार प्रतिगामी हो: केपि ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिगामी को संज्ञा दिएका छन् । उनले सरकारले दादागिरी देखाउन थालेको पनि आरोप लगाए ।
आइतबार तुलसीलाल अमात्यको २४ औं स्मृतिका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देउवा नेतृत्वको सरकार
बनेदेखिनै प्रतिगामीहरुको दादागिरी सुरु भएको बताए । दमन गर्ने काम भैसक्यो खाना खान नदिएर रोक्ने काम भैसक्यो । भद्दा राजनीतिकरण सुरु भैसक्यो अध्यक्ष ओलीले भने यो अलोकतान्त्रिक तरिकाको कास्टिङ मात्रै हो । हामी यस्ता सवै कुराको प्रतिवाद र आवश्यक परे प्रतिरोध पनि गर्छौ ।
उनले देउवा नेतृत्वको प्रतिगामी सरकार निष्ठा छोडेर दक्षिणपन्थीसँग मिल्न गएको बताए । हाम्रा पार्टीका केही बिग्रिएका तत्वहरुले गर्दा प्रतिगामीहरुको सरकार बन्ने यो स्थिति आएको हो ओलीको भनाइ छ ।
त्यसक्रममा उनले केही स्वार्थी लोभिपापीहरुका कारण नेकपा फुटाइएको पनि बताए । ओलीले अनुशासनहीन र अराजकहरुले नै नेकपा फुटाएको आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकार पनि ढालेको आरोप लगाए । उनले त्यस्ताहरुले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अघि नबढाउने दावी पनि गरे ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र यस्ता अत्यन्तै दुखद् पात्र र प्रवृत्तिहरू छन् । यस्ताबाट पार्टीलाई बचाउनुपर्छ । विचारबाट पार्टी चलाउनुपर्छ उनले माधव नेपाल समूहप्रति लक्षित गर्दै भने आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर प्रतिपक्षमा पुगेर बेसरम कामहरु भएका छन् । ओलीले तुलसीलालका खास अनुयायी आफूहरु
भएको दावी पनि गरे । आन्दोलन र अथक संघर्षको पर्याय हुन् तुलसीलालहरु । उहाँहरुले सिर्जना गरेको आन्दोलनका उत्तराधिकारी हामी यो आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन दिँदैनौ ओलीले भने तर आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन खोज्ने अग्रगमन र परिवर्तनका विरुद्ध लागिरहेका हुन्छन् ।
उनले ऋषिमुनिका कालखण्डमा यज्ञ र ध्यान पनि भत्काउने तथा बिगार्ने षड्यन्त्र हुने गरेको भन्दै अहिले पनि एमालेमाथि त्यस्तै षड्यन्त्र भइरहेको बताए । उनले विगतमा पनि नेपाली राजनीतिमा सालिक भत्काउनेदेखि पुस्तक डढाउने काम भएको उल्लेख गर्दै ती सवै उन्मादबाट भएको बताए । ओलीले पुष्पलालले स्थापना गरेको र मनमोहन मदन भण्डारीले अघि बढाएको पार्टी एमालेले कम्युनिस्टहरूले विकास गर्न सक्छन् भन्ने पुष्टि गरेको पनि बताए ।
२०७८ श्रावण १८, सोमबार प्रकाशित0Minutes 429 Views
३.	काठमाडौं बाट मेयरमा बालेनको अग्रता कायमै
४.	काठमाडौं र भरतपुर माहानगरपालिका यी २ मेयर मध्ये तपाईंको साथ कसलाई